Boqolaal katirsan Odayaashii soo xulay Xildhibaanada Baarlamaanka oo kusii qulqulaya Wilaayaatka islaamiga ah [Warbixin].
Sunday July 28, 2019 - 18:10:21 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dhammaan wilaayaatka islaamiga ah ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxaa laga dareemayaa qulqulka Odayaal Towbadkeenayaan ah kuwaas oo ay ka qeyb qaatay soo xuliddii xildhibaannada baarlamaanka dowladda Federaalka.
Sawir hore kulan dhax maray Alshabaab iyo Odayaal dhaqameedyo
Odayaashan oo ka faa'iidaysanaya cafiskii ya fidisay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa tiigsanaya wilaayaatka islaamiga ah si ay halkaas isaga diiwaan geliyaan.
Mas'uul katirsan Xafiiska siyaasadda iyo Xiriirka gobollada Xarakada Al Shabaab ayaa Shabakadda SomaliMeMo u sheegay in Boqolaal kamid ah odayaashii Xildhibaannada soo xulay ay soo gaareen wilaayaatka Islaamiga ah halkaas oo Towbada loogu qabtay.
Wuxuu sheegay in Odayaashu ay soo dhoweyn kala kulmeen maamullada islaamiga ah walina ladareemayo qulqulkooda waxayna odayaashan ka imaanayaan dhammaan deegaannada ay ka jiraan maamul goboleedyada shisheeyaha u shaqeeya iyo magaalada Muqdisho.
Tirada Oday dhaqameedyada ee iska xaadiriyay Wilaayaatka islaamiga ah ayaa ah 159 kuwaas oo ka kala yimid illaa Afar maamul goboleed balse waxaa jira kuwa badan oo ay usuurtageli waysay in ay soo tiigsadaan wilaayaatka oo xiriiro lasoo sameeyay Xarakada Al Shabaab kuna dhawaaqay in ay ka towbadkeenaan dambigii ay galeen oo ahaa in ay soo xuleen Xildhibaanada sheegtay sharci dajiyaal.
Maamul Jubbaland :waxaa ka yimid 33 Oday dhaqameed Towbad keenayaal ah
Maamulka Hirshabelle: waxaa ka yimid 53 Oday dhaqameed Towbad keenayaal ah
Koonfur galbeed: waxaa ka yimid 40 Oday dhaqameed Towbad keenayaal ah
Galmudug: waxaa ka yimid 33 Oday dhaqameed Towbad keenayaal ah
Wararka ayaa intaas ku daraya in Odayaasha qaar ay xiriiro lasoo sameeyeen mas'uuliyiinta wilaayaatka Islaamiga ah islamarkaana ayna sheegeen in ay imaan doonaan iyagoo Towbadkeenayaal ah ballan ayaana loo qabtay waxaana lasiiyay ammaan inta ay kasoo gaarayaan wilaayaatka, "Boqolaal kamid ah Odayaashii soo xulay Xildhibaanada Ridada ayaa soo gaaray wilaayaatka Islaamiga ah iyagoo ka faa'iidaysanaya waqtigii ay mujaahidiintu uqabteen, kuwa kalane xiriiro ayay lasoo sameeyeen mujaahidiinta oo wadada ayay kusoo jiraan ammaan ayaana lasiiyay inta ay kasoo gaarayaan wilaayaatka" ayuu yiri mas'uul lahadlay SomaliMeMo.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Odayaashii baarlamaanka kasoo xulay dhanka maamulka isku magacaabay Puntland ay xiriiro lasoo sameeyeen Al Shabaab ayna iclaamiyeen in ay ka towbad keeneen wixii ay sameeyeen islamarkaana lasiiyay ammaan buuxa.
13 Maalmood ayaa kasoo wareegtay 45-tii maalin ee Al Shabaab ay uqabatay in ay ku Towbadkeenaan Odayaashii soo xulay xildhibaannada baarlamaanka dowladda Federaalka Soomaaliya waxaana muuqata in Odayaashan ay dhegaha ka furaysteen caga jugleynta uga imaanaysa maamul goboleedyada iyo DF-ka.
15,July,2019 ayay aheyd markii ay Al Shabaab baaq towbadkeen ah udirtay dhammaan odayaashii dhaqanka ee soo xulay xidhibaannada baarlamaanka waxaana muuqata in Odayaashu baaqaasi si heer sare ah uso ajiibayaan.
Ciidamo American iyo Soomaali ah oo lagu weeraray deegaan katirsan Sh/Hoose.
Al Shabaab Oo Sedax qof ku dishay degmo katirsan gobolka Hiiraan.
Taliye katirsan Ciidamada Maamulka 'Puntland'oo Boosaaso lagu dilay.